Cristiano Ronaldo oo ku Dalxiisaya China iyadoo ay Kulan Saaxiibtinimo Balansan yihiin Juventus iyo Real Madrid…MA CAYAARAYAA DHEESHAAS ? – Gool FM
CR Shariif July 21, 2018
( Beijing ) 21 Luulyo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa ku biireynin kooxda Juventus kulamadeeda xagaaga fasaxa ay ku qaadaneyso dalka Mareykankan wuxuuna sido kale seegayaa kulanka kooxdiisii hore ee Real Madrid ee tartanka International Champions Cup (ICC) oo ay wada dheeli doonaan bisha dambe wuxuuna taa badalkeed sii wadayana dalxiiska uu qeybta kala yahay Shirkada Nike ee uu ku joogo Magaalada Beijing.
Laacibkan shanta jeer ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or, ayaa ka dhaqaaqay Real Madrid kaddib sagaal sano uu ku qaatay kooxda reer Spanish, wuxuuna u dhaliyay 451 gool isagoo sido kale kula guuleystay afar jeer koobka Champions League.
Ronaldo ayaa u wareegay Juventus isagoo lagu soo qaatay adduun dhan £100m, wuxuuna tilmaamay in kooxda ka dhisan horyaalka Serie A ay tahay kooxda qura ee isaga dalbatay xagaagan.
33 jirkaan ayaa kulan waqti dheera la qaatay macalinka kooxda Massimiliano Allegri, kasoo aan qasab kaga dhigin cayaariyahanka inuu ka qeyb qaato kulamada saaxiintinimo ee tartanka International Champions Cup.
Taa badalkeed, Ronaldo ayaa salaan ka gudoomay kumaan taageerayaala markii uu kasoo dagay Beijing halkasoo uu ku tagay booqashadiisa sanadlaha ah.
khamiistii, wuxuu booqday iskuulka Haidian Minzu ee caasimada China isagoo jimicsi dhanka jirkaa la qaatay 90 arday. Waxaana sii raacay xoogaa cayaaro iyo wareysiyo ay la sheeyeen dadweynaha.